DOWNLOAD De Havilland DHC-3 Otter and FS2004 - Rikoooo
downloads 8 980
Ebe a bụ a seaplane na bụ futuristic. N'ezie, ọ bụ a fictional "prototype", ma na pụrụ ịbụ nnọọ Ná ekwe! dị nnọọ mma ụda, nnukwu oke nke textures, model nnọọ mma n'anya. Ga na-agbalị ya! The de Havilland Canada DHC-3, a makwaara dị ka "Otter" (na French, "otter") bụ monoplane.
Onye edemede: Heugene Heyart